स्लाईडहरूमा स्प्रेडसिटहरू राख्दै
स्लाईडहरूमा स्प्रिडसिट समावेश गर्दा
OLE अब्जेक्टको रूपमा नयाँ स्प्रेडशीट घुसाउँदै
OLE वस्तुको रूपमा तपाईँ खाली LibreOffice Calc स्प्रिडसिट स्लाईडमा थप गर्न सक्नुहुन्छ ।
तपाईँले स्प्रेडसिट घुसाउन चाहनु भएको स्लाईडमा जानुहोस् ।
कक्षहरू रिसाइज नगरिकन स्प्रिडसिट रिसाइज गर्नका लागि, स्प्रिडसिटमा डबल-क्लिक गर्नुहोस्, र कुनो ह्यान्डल तान्नुहोस्. स्प्रिडसिटमा कक्षहरू रिसाइज गर्नका लागि, स्प्रिडसिट क्लिक गर्नुहोस्, र कुनो ह्यान्डल तान्नुहोस् ।
फाईलबाट स्प्रिेडशिट घुसाउनुहोस्
तपाईँको स्लाईडमा जब तपाईँले हट्दै गरेको स्प्रिडसिट घुसाउनुहुन्छ, परिवर्तनहरू जुन सक्कली स्प्रिडसिट फाइलका लागि बनाइएको थियो तपाईँको स्लाईडमा अद्यावधिक हुँदैन. तपाईँ, तथापि, तपाईँको स्लाईडमा स्प्रिडसिट परिवर्तनहरू बनाउन सक्नुहुन्छ ।
रोज्नुहोस् घुसाउनुहोस् - वस्तु - OLE वस्तु.
फाइलबाट सिर्जना गर्नुहोस् चयन गर्नुहोस्, र खोजी गर्नुहोस् क्लिक गर्नुहोस् ।
फाइल अवस्थित गर्नुहोस् जुन तपाईँ घुसाउन चाहनुहुन्छ, र क्लिक गर्नुहोस् ठीक छ
सम्पूर्ण स्प्रिडसिट तपाईँको स्लाईडमा घुसाइएको छ. यदि तपाईँ सिट परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ जुन प्रदर्शन भएको छ, स्प्रिडसिट डबल-क्लिक गर्नुहोस्, र छुट्टै सिट चयन गर्नुहोस् ।
घुसाउनुहोस् - वस्तु - OLE वस्तु
Title is: स्लाईडहरूमा स्प्रेडसिटहरू राख्दै